SonSon LinLin - Page 439 of 443 - Celebrity And Entertainment
လေဖြတ်ဝေဒနာကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖခင်ကြီးကိုမင်းလှိုင်(မွန်ကြီး) ကိုစောင့်ရှောက်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ့် သမီးဖြစ်သူ သျှင်မင်းသူ
January 26, 2021 sonsonlinlin 0
လေဖြတ်ဝေဒနာကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖခင်ကြီးကိုမင်းလှိုင်(မွန်ကြီး) ကိုစောင့်ရှောက်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ့် သမီးဖြစ်သူ သျှင်မင်းသူ မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေ အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ် ကိုင်တော့မယ့် သရုပ်ဆောင်ကိုမင်းလှိုင်ရဲ့သမီးလေး သျှင်မင်းသူအကြောင်းလေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးလေကိုမင်းလှိုင်ကိုတော့ဟာသသရုပ်ဆောင်အဖြစ် လူသိများတဲ့ပြည်သူအချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသံလေးဝဲတဲဝဲတဲနဲ့မွန်ကြီးလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ကိုမင်းလှိုင်ဟာကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သရုပ်ဆောင်ကိုမင်းလှိုင်ကအခုဆိုရင် လေဖြတ်ဝေဒနာကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖခင်ကြီးကိုအရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ စောင်ရှောက်နေရတယ်လို့သမီးလေးသျှင်မင်းသူကဆို လာပါတယ်။ အခုဆိုရင်သမီးလေးသျှင်မင်းသူကအနုပညာအလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ်လို့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအသိပေးလာပါတယ်။၂၂ရက်နေ့ကလည်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အဖြူရောင်သက္ကရာဇ်ဆိုတဲ့ Forever Group Co.,Ltd ကရိုက်ကူးဇာတ်ကားတွင်လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလာပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အောင်မြင့်မြတ်၊ဘုန်းဆက်သွင်တို့ပါဝင်ပြီးဝါရင့်သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ကိုမင်းလှိုင်ကိုအားပေးသလိုသမီးလေးသျှင်မင်းသူကိုအားပေးမယ်လိုမျှော်လင့်ပါတယ် ။ အစမှအဆုံးဖတ်ပေးသော […]
မိမိချစ်သူကို ဖုန်းခေါ်လို့ ဖုန်းမကိုင်တဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းထဲ အော်တိုပေါ်လာတဲ့ အတွေးများ မိန်းကလေးတွေ ဆိုတာလေ နည်းနည်းတော့ ပူပင်မှုတွေ များတဲ့ အမျိုးပါ ။ ဘယ်သူ့ကြောင့်မှလည်း မဟုတ်ဘဲ သူတို့ဟာသူတို့ကို အပူအပင်တွေနဲ့ ပြည့်နေ တတ်တာ ။အတွေးတွေများပြီး စိတ်ပူပင် တတ်လွန်းတာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းကလေး မတူတဲ့ အချက်ပါ ။ မိန်းကလေးတွေက အသေးစိတ်တယ် ၊ကိစ္စသေးသေးလေးတွေ ကအစ အလေးထား တတ်တော့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ […]
ကိုယျ့ထကျ အသကျကွီးတဲ့ ဦးအရှယျနဲ့ ခဈြသူဖွဈရခွငျး၏ ကောငျးကြိုး(၇)ခု
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုး(၇)ခု ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် ကိုယ်အားကိုးနိုင်တယ်။ ဆိုးချင်သလို ဆိုးနိုင်မယ်။ ချွဲလို့ရတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က သူ့ကိုဆရာတောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနဲ့ကလေး စုံတွဲတိုင်းတော့ ဒီလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ ။ သေချာတာကတော့ ဦးအရွယ်တွေက ကိုယ့်ထက် ဗဟုသုတများမယ်။ မလုပ်သင့်တာကို မလုပ်ဖို့ သူတို့က ဆုံးမနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် […]
အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် သနပ်ခါးသည်အဘွားက ကားလာဌားလို့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရသောအခါ
ထိုငျနတေုနျး အသကျ ၈၅ နှဈအရှယျ သနပျခါးသညျအဘှားက ကားလာဌားလို့ လိုကျပို့ပေးလိုကျတဲ့အခါမှာ အရမျးကို အံသွသှားတဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ အဖွဈပဲဖွဈပါတယျ။ လူတှဟော အသကျအရှယျကွီးမွငျ့လာတဲ့အခါမှာရုနျးကနျလှုပျရှားဖို့ တျောတျောလေးကို ခကျခဲပါတယျ။ စားရေးသောကျရေး နရေေးထိုငျရေးအတှကျ တဈကိုယျ တညျး ရှာဖှဖေို့ဆိုတာ ပိုခကျခဲပါတယျ။ ယခုလို ခကျခဲတဲ့ကွားက အသကျ ၈၅ နှဈအရှယျအဖှားအိုတဈယောကျက ကားငှားခွငျးကို ခံခဲ့ရတဲ့ လူတဈယောကျဟာ လူမှုကှနျယကျမှာ ယခုကဲ့သို့ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ကြောကျဆညျ Alpha ဘိလပျမွစေကျရုံရှထေို့ငျနတေုနျး […]
ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ? ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ယောကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်ကြည့်တတ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ ၃။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ […]
မျက်ကွင်းညိုတာကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း ၂ သွယ် မိတ်ကပ်လိမ်းထားရင်တောင် မျက်ကွင်းညိုတာကို ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးနော်။ မျက်ကွင်းညိုတာဟာ သာမန်လူတွေအတွက်တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် အလှအပကြိုက်တဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ မျက်ကွင်းညိုရတဲ့အကြောင်းရင်း အိပ်ရေးပျက်လို့ အအိပ်လွန်လို့ မျက်လုံးရောင်တာ မျက်ကွင်းချိုင့်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွှတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေ အစားအသောက်တွေ၊ သရေစာစားတာများတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေကြောင့် မျက်ကွင်းညိုတာတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သခွားသီးနဲ့ အာလူး သခွားသီးနဲ့ အာလူးကို ကြိတ်ပြီး […]
(၂)မိနဈအတှငျး မကျြနှာကို မညျးညဈခွငျးကငျးပွီး ကွညျလငျဝငျးပစတေဲ့ အလှယျကူဆုံး နညျးလမျးကောငျး တဈခါတဈလမှော အဆငျသငျ့လိမျးနိုငျတဲ့ အလှကုနျတှထေကျ အိမျတှငျးဖွဈ ဓာတုပစ်စညျးမပါတဲ့ မီးဖိုခြောငျပစ်စညျးတှကေ ပိုပွီး အစှမျးထကျပါတယျ။ အကယျ၍ သငျ့ရဲ့အသားအရကေ ဝငျးပဖွူစငျမှု မရှိဘဲ ဆဲလျသတှေကွေောငျ့မဲညဈနမေယျဆိုလြှငျ ဆားသံပုယိုသီးခွမျးက အပွညျ့အဝ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျနျော သံပုယိုသီးကို မထူမပါးလှီးပွီး ဆားအနညျးငယျကပျကာ မကျြနှာပွငျအနှံ့ ညှငျသာစှာ ပှတျပေးပါ။ ၂မိနဈခနျ့ ပွုလုပျပွီးလြှငျ ရသေီးသနျ့ဖွငျ့ ဆေးကွောပွီး ခွောကျသှအေ့ောငျ သဘကျဖွငျ့ ညှငျသာစှာ […]
ထိုငျမသိမျးဆိုတဲ့ ရှေးအချေါကို မတိမျးပါးစလေိုပါ
ထိုငျမသိမျးဆိုတဲ့ ရှေးအချေါကို မတိမျးပါးစလေိုပါ ထိုငျမသိမျး ! အချေါအဝျေါ မတိမျးပါးစလေိုပါ တဈခါက. TV Channel တဈခု မှာ နံမညျကြျော ဒီဇိုငျနာ တဈယောကျရဲ့ Interview တဈခုကွညျ့ လိုကျရတယျ ~~ သူက. သူဖနျတီး တဲ့ မဂျလာဝတျစုံ တှေ အကွောငျး အားတကျသရော ရှငျးပွနတောပါ… အဲ့မှာ ဘာတှလေို့ကျရလဲ ဆိုတော့ သတို့သမီး ဗွနျ့ထဘီကွီးကိုကိုငျ၊ကိုငျပွီး ဒီ ထိုငျမသိမျးကို စီးကှငျ့တှေ […]
မိန်းမက လင်ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ အိပ်ရင် ယောကျာ်းက ဘုန်းကံနိမ့်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးမှာ စီးပွားရေးလာဒ်ပိတ်စေတယ်ဆိုတာ တကယ်လား??? လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာပြီဆို တစ်အိပ်ယာတည်း အတူအိပ် ကြရပါတယ်။ မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ သာ အိပ်ခွင့်ရှိပါတယ်……… ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာပဲအိပ်ခွင့်ရှိတာလဲ………ဘာကြောင့်လဲ အမှန်ဆို အိပ်ချင်တဲ့ ဘက်အိပ်မှာပေါ့နော်… တချို့ဆို အိပ်ယာဘေးဘက် နံရံ ထောင့်ဘက် အခြမ်းကို မိန်းမသားတွေ ပိုမိုကြိုက်နှစ် […]
နစရောမရှိလို့ မှောငြးအောကမြှာနနရေတေဲ့ မိသားစုကိုကှည့ပြှီး ဝမြးနညြးမကွရြညဝြဲကာ အလှူငှမွေားလှူဒါနြးခဲ့တဲ့ဒိနြးဒေါငရြဲ့ဗီဒီယိုဖိုငြ
နေစရာမရှိလို့ မြောင်းအောက်မှာနေနေရတဲ့ မိသားစုကိုကြည့်ပြီး ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ဝဲကာ အလှူငွေများလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် Vedioအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည်။ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်တစ်ယောက်ကတော့ ဇာတ်သဘင် လူရွှင်တော်ဘဝကနေ ဟာသရုပ်ဆောင် အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဒိန်းဒေါင်ကတော့ အလှူအတန်းနဲ့ ကုသိုလ်ရေးမှာလည်း လက်မနှေးသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်သလို ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ၊ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးကာပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ ဟာသလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားကာ ယနေ့အချိန်ထိတိုင် တစ်ခဲနက်အားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ကိုင်သလို အလှူအတန်းနဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကာ […]
« 1 … 438 439 440 … 443 »